Kpido: nlekota oru
Ịgụ Oge: <1 nkeji Social CRM bụ otu n'ime okwu ndị ahụ na-emebiga ihe ókè na mgbagwoju anya. O yiri ka ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ụdị mmekọrịta ha amalitela ịkekọrịta ngwa ha na mpaghara Social CRM. N'uche m, enwere ọtụtụ atụmatụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-enwerịrị tupu ọ kpọọ onwe ya Social CRM: Nlekota - ikike ileba anya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ịtọ ntọala. Mata - ikike iji weghara
Ịgụ Oge: 2 nkeji N’ụwa taa, mmekọrịta mmadụ na ibe ya ihe onye ahịa kwuru bụ nke kachasị mkpa maka ndị ahịa. Mmasị nwere ike ịbụ ihe bara uru n'okwu a. Ihe nyocha ederede nke ihe nlebara anya weputara eziokwu, mmekorita, na mmetuta site na labyrinth nke nzaghachi ndi natara na ikwu okwu, kwalite mgbasa ozi nkwado, tweet, mmelite Facebook, nzaghachi blog, nzaghachi nyocha - nke ọma, ị na-enweta ọsọ! Igwe mmịpụta nke Attensity na-emetụta ụkpụrụ oge a nwalere ụkpụrụ asụsụ yana
Fraịde, Jenụwarị 22, 2010 Sunday, October 4, 2015 Michael Reynolds
Ịgụ Oge: 2 nkeji Ọ bụrụ na ị na-agbaso usoro mgbasa ozi ọha na eze ma ọlị, ikekwe ị nụla ọtụtụ ihe banyere ịbanye na "mkparịta ụka" na otu esi esonye. May nwekwara nụkwa ịdọ aka na ntị: "ndị mmadụ na-ekwu maka ụlọ ọrụ gị ma ị nọ ya ma ị nọghị". Nke a bụ eziokwu ma bụrụkwa ezigbo ihe kpatara ị ga-eji mbanye na mgbasa ozi mmekọrịta ma bido isonye. Ọ bụrụ na ị bụ akụkụ nke mkparịta ụka ahụ, ịnwere ike ịzaghachi ajụjụ, mee njikwa mmebi, na
← Nke gara aga 1 2 3
Page 3 nke 3